Расписание электричек Туту.ру 3.13.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.13.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Расписание электричек Туту.ру
Расписание электричек Туту.ру ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ခရီးသွားများအတွက်များအတွက်ရေပန်းစား site မှရထား၏အများဆုံးလက်ရှိအချိန်ဇယား Tutu.ru.
ရထားနှောင်းပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းသည်ဆိုပါက - သင် applications များသုံးပြီး, အွန်လိုင်းကအကြောင်းသိကြပါလိမ့်မယ် Tutu.ru.
အရာအားလုံးသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်နှင့်ပင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုပဲရရှိနိုင်ပါလိမ့်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်း desktop ပေါ်မှာပေါ် shortcuts တွေကိုအမည်ပြောင်းနှင့်ထိုသူတို့အဘို့ဖန်တီးအကြိုက်ဆုံးများမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
Tver, Vyborg - - စိန့်ပီတာစဘတ်, Podolsk - Tsaritsyno, နရာ - ●ဒီ app လက်မှတ်များနှင့်ရထားမော်စကိုများအတွက်ခရီးသွားအချိန်များအတွက်စျေးနှုန်းများပြသထားတယ်မော်စကိုကိယက်ဗ်နှင့်အခြားဒေသများ;
●သင်ဟာမော်စကိုသို့မဟုတ်စိန့်ပီတာစဘတ်၌သင်တို့၏မီးရထားမှစလှေတျတျောဘယ်မှာသိပါသို့မဟုတ် "Sputnik", "Rex", "မျို" ဖော်ပြကြသည်မဟုတ်လော တစ်ဘူတာမော်စကို (အားလုံးဘူတာ) သို့မဟုတ်စိန့်ပီတာစဘတ် (အားလုံးဆိပ်ကမ်း) ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို app ကိုရှိရာက start ခရီးသည်ရထားသင်ပြောပြတော်မူမည်
●ရထားအချိန်ဇယားဟာမြို့တော်အဘို့, မော်စကိုနှင့် St. ပီတာစဘတ်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားမြို့များထဲမှာမသာမရရှိနိုင်ပါသည်: Arkhangelsk, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Vologda, Voronezh, Yekaterinburg, Ivanovo, Irkutsk, ကာဇန်, Kaliningrad, Kaluga, Kostroma, နိုဒါကို, Kursk, Penza, Rostov-on-Don, Ryazan, Samara, Saransk, Smolensk, Sochi, Stavropol, Tambov, Tula, Ulyanovsk, Ufa နှင့် Yaroslavl;
●သင်အချိန်ဇယားကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအစာရှောင်ရထားပေါ်တွင်လက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ, အမြန်ရထားနှင့် "မျို" ကြောင့်ဆင်ခြေဖုံးရထားမီးရထားအလွန်နီးကပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသုံးပါ။
: ထို့အပြင်လျှောက်လွှာ Tutu.ru သင်ရထားနှင့် MCC Aeroexpress အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်
● CIP: ရထား၏လှုပ်ရှားမှုများ၏အချိန်ဇယားနှင့်အစီအစဉ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရရှိနိုင်ပါ၏
● Aeroexpress: အလမ်းကြောင်းမော်စကိုအပေါ်ထွက်ခွာနှင့်ဆိုက်ရောက်၏အတိအကျအချိန် - Vnukovo မော်စကို - Sheremetyevo မော်စကို - Domodedovo ။
Расписание электричек Туту.ру အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Расписание электричек Туту.ру အား အခ်က္ျပပါ
andreyk666 စတိုး 1.15k 620.45k
Расписание электричек Туту.ру ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Расписание электричек Туту.ру အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.13.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.tutu.ru/2read/suburban_faq/confidential_etrain_ntt/
Release date: 2019-09-13 13:09:18
လက်မှတ် SHA1: 71:7A:D2:1B:DB:D1:49:A7:5B:0C:B0:A7:E0:86:45:C4:82:FF:9C:3B
အဖွဲ့အစည်း (O): Tutu.ru
Расписание электричек Туту.ру APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ